» फाँसी लागेको अभिनय गरेर टिकटक बनाउँदै गर्दा अचानक कुर्सी चिप्लिए पछि, एक किशोरीको मृत्यु भयो !आखिर को हुन त उनी? हेर्नुहोस.. फाँसी लागेको अभिनय गरेर टिकटक बनाउँदै गर्दा अचानक कुर्सी चिप्लिए पछि, एक किशोरीको मृत्यु भयो !आखिर को हुन त उनी? हेर्नुहोस.. – हाम्रो खबर
फाँसी लागेको अभिनय गरेर टिकटक बनाउँदै गर्दा अचानक कुर्सी चिप्लिए पछि, एक किशोरीको मृत्यु भयो !आखिर को हुन त उनी? हेर्नुहोस..
भारतको इन्दौरमा १२ वर्षीया किशोरीले सेल्फी लिने क्रममा ज्यान गु’माएकी छिन् । भनिन्छ कि ती केटी आफ्नो घरको कुर्सीमा उ’भिएकी थिइन र पा सो ग’लामा लगाएर सेल्फी लिईरहेकी थिइन् । यस समयमा उनको स’न्तुलन बि’ग्रेको थियो र अभिनय गरेको स’त्य सावित भयो । यसपछि उनको साँच्चै ज्यान गयो ।
यो घ’टना इ’न्दौरको माँ वै’ष्णोदेवी न’गरसँग सम्बन्धित छ ।पुलिसले श’वलाई लिएर पो’ष्टमार्ट’मको लागि पठाएको छ र यसबारे अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । दु’र्घटनाको क्रममा केटीको बुबा घरमा थिए भनेर पुलिसले जनाएको छ ।
जब केटी लामो समय कोठा बाहिर निस्केकी थिइनन्, त्यसपछि परिवारका सदस्यहरू उनको कोठामा गए र घ’टनाको बास्तविकता थाहा पाए । ना’तेदारहरु ड’राए, परिवारले छिमेकीहरूलाई बो’लाए र केटीलाई तल ल्या’इयो ।तर त्यसबेला सम्म उनको सा’स रो’कि सकेको थियो । त्यसपछि सूचना प्रहरीलाई दिइयो ।
पुलिसले श’व पो’स्टमार्ट’मका लागि अस्पताल पठाए ।प्रा’रम्भिक अनुसन्धानमा, पु’लिसले यसको कारण पत्ता लगाउन सकेन । घ’टनास्थलबाट कुनै प्र’माण नभएको खण्डमा से’ल्फी नै केटीको मृ’त्युको कारण भएको जस्तो देखिन्छ ।